လက်မထပ်မီလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ - အဖွဲ့အစည်းအခြေပြုကဏ္ section ဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
ပန် Afr Med ဂျေ 2017 နိုဝင်ဘာ 15; 28: 234 ။ Doi: 10.11604 / pamj.2017.28.234.12125 ။
Akibu M က1, Gebresellasie က F2, Zekarias က F3, Tsegaye W က4.
မြီးကောင်ပေါက်အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်သို့သူတို့ကိုငါမောင်းကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုရေး, သက်တူရွယ်တူများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖိအားမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြား HIV / AIDS နှင့်အမျိုးမျိုးသောလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (ကာလသား) ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုလျော့နည်းစေသည်အထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု delay လုပ်ခြင်း, လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတိုးပွားလာခံရဖို့အစီရင်ခံခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း။
Institution မှ အခြေခံ. Cross-Section စစ်တမ်းမတ်လ 2016 ဇန်နဝါရီလမှ 2016 အကြားကောက်ယူခဲ့သည်။ 604 ကျောင်းသားတစ်ဦးကစုစုပေါင်း Multi-ဇာတ်စင်နမူနာ technique ကိုသုံးပြီးလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ရောနှောထားသောဘက်စုံနှင့်အရည်အသွေးချဉ်းကပ်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ Bivariate နှင့် multivariate Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်အချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှုပြုလုပ်သောနေရာတွင်လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ၅၄.၃% ရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်၏ပျမ်းမျှအသက် 54.3 ± 18.7 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏လိင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းလိုသောကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ထက်ဝက် (၅၀.၆%) သည်ဖျော်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုသင်တန်းသားများ၏ထက်ဝက်ထက်လိင်တက်ကြွခဲ့ထင်ရှားခဲ့သည်။ အထီးဖြစ်ခြင်း, ညစ်ညမ်းနှင့်မြင့်မားသောပညာရပ်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ဆေးပညာအင်စတီကျုနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ, ကျား, မရုံးနှင့် HIV အရင်းအမြစ်စင်တာအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အဖြစ်က၎င်း၏ဘုံအကြိုးဆကျမြား၏ရေပန်းစားပျံ့နှံ့ minimize လုပ်ဖို့အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုဆောင်ခဲ့မှာပစ်မှတ်ထားကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကိုစုစည်းဖို့ရှိသည်။
သော့ချက်စာလုံးများ - ခန့်မှန်းသူ; လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်ပွဲ ဦး ထွက်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ
အခမဲ့ PMC အပိုဒ်
အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်အချက်များ: Multivariate Logistic ဆုတ်ယုတ်မှာတော့အထီးအမျိုးသမီးထက်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် (AOR22.3% CI = 95-1.59) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ 3.3 ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ကျောင်းသားများကိုအိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်း (AOR 2.3 2.3% CI = 95-1.6) ကျင့်သုံး၏ 3.27 ကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားသဘောထားကိုခဲ့အဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်အကဲခတ်, အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏အခြားခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ထားရှိခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည် Pre-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့် (AOR 0.43 95% CI = 0.25-0.74) ဆန့်ကျင်နေတဲ့အကာအကွယ်အချက်ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ မြင့်မားတဲ့ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကျောင်းသားများနိမ့်ရာထူးကျောင်းသားများကိုထက်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ 57% လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် (စားပွဲတင် 4).
ဒီရုပ်ရှင်တွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ဒီမှာကျောင်းသားအများစုသည်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများကိုသင်ယူရန်နှင့်မတူညီသောလိင်ရာထူးများကိုလေ့လာရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအားကိုးကြသည်။ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးများသည်မိန်းကလေးများအားအော်ဂဇင်စ်သို့မည်သို့အလျင်အမြန်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ကိုလေ့လာရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ ဒီရုပ်ရှင်တွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေတဲ့ကျောင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်လောက်အလုပ်များနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရင်သင်အရမ်းအံ့သြသွားမှာပါ။ ”